Coaching leadership | Fivoarana ho an'ny mpitarika | NextMapping
Matoky tena ve ianao amin'ny ho avy? Faly anao ve ny mety ho anao sy ny orinasanao amin'ny ho avy?
Ny mpanazatra mpitarika anay NextMapping ™ dia hanome anao ny drafitra, fanohanana ary fitarihana mba hamoronana ny hoavinao tsara indrindra. Ny olona mahomby rehetra dia mampiasa mpanazatra mpandraharaha na mpanazatra amin'ny fitarihana endrika amin'ny mpampianatra / mpanazatra / mpitari-dalana.
ny Mpanazatra mpanazatra manamarina NextMapping ™ hiara-hiasa aminao hanangana paikady, hanome aingam-panahy ny hoavinao amin'ny sehatry ny sainao miasa ary hanampy anao hampivelatra ny fahaiza-manao ilaina ho anao hiroborobo sy hivoatra haingana amin'ny fotoana haingana sy haingana.
Ny fitohizan'ny fikorontanana mitohy dia hitombo hatrany hatrany - ny mpifaninana aminao manaraka dia ny mpandraharaha manana toe-tsaina namorona ny Air BNB, Uber, Dropbox ary Tesla. ”
Misy karazany roa ...
… Izay ananan'ny olona momba ny ho avy:
1. Hanahy aho momba izany raha tena misy fiatraikany amiko / ny orinasa… NA 2. Ento io! Faly aho amin'ny ho avy ary hanao izay rehetra azoko atao mba ho vonona ho ahy / ny ekipako / ny orinasa. Ny toe-tsaina voalohany dia fisainana tsy fahampiana mifantoka amin'ny fiarovana ny satan'ny quo sy tahotra ny fanovana. Ny toe-tsaina faharoa dia fisainana be dia be izay mifantoka amin'ny fanaraha-maso sy ny hetsika nomena hery hanomezana ny ho avy mahavariana anao. Iray amin'ireo fanamby lehibe indrindra ho an'ny mpitarika, ekipa ary mpandraharaha ny mitaona hatrany ny aingam-panahy sy mifantoka amin'ny ho avy. Mpitondra maro no mifantoka amin'ny zava-misy isan'andro, mamono afo ary matetika tsy mifantoka amin'ny fahitana na mitarika any amin'ny ho avy manome aingam-panahy. Mba hamoronana fitondran-tena maharitra sy azo havaozina dia mila manana paikady miorina amin'ny famoronana 'inona ny manaraka' manery miaraka amin'ny fandraisana andraikitra ny fanovana ilaina mba ho vonona amin'ny ho avy. Misy siansa amin'ny fanovana ary ny mpahay siansa momba ny fitondran-tena dia namantatra ireo singa manan-danja amin'ny fanovana maharitra amin'ny fijerena ny ho avy. Ireo singa fototra ireo dia misy ny fahavononany hiova, ny fahaiza-misaina, ny fihetsika vaovao ary ny fifantohana amin'ny 'antony' manery.
Ahoana ny fiasan'ny mpanazatra mitarika:
Ao amin'ny NextMapping dia manana fizotran'ny mpanazatra tompony izahay izay manampy ny mpitarika, ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary ny mpandraharaha hitondra ny fahombiazany amin'ny sehatra 'manaraka'. Mampiasa ny dingana enina amin'ny NextMapping izahay hamolavola drafitra mpanazatra manokana izay manomboka amin'ny toerana misy anao izao sy izay tianao haleha. Manomboka amin'ny famakafakana ny toe-javatra misy anao izahay izao amin'ny alàlan'ny fizotran'ny Discover anay ary mandritra ny fandaharam-pampianarana ho an'ny mpitarika anao dia manampy izahay hamantatra ny tanjaka sy ny faritra ahafahana mampitombo ny fahombiazanao sy ny valiny. Ireo mpanazatra anay dia voamarina matihanina NextMapping ary mampiasa ny fomba fiasanay mpanazatra / mpanolo-tsaina tokana hiara-miasa aminao. Ny coaching amin'ny leadership dia mitaky anao amin'ny maha-mpitondra anao vonona ny hanombantombana tena, ho tompon'andraikitra amin'ny fanovana ary hanolo-tena hitarika fiovana miaraka amin'ireo ekipanao. Amin'ny maha-mpanazatra anao manokana anao dia ampamoahinay aminao ny tanjonao, hiara-hiasa aminao izahay hanome hevitra paikady vaovao, hanampy anao izahay handrafitra drafitra hamoronana ny ho avy tadiavinao. Efa mahomby ianao! Ny mpitondra mahomby indrindra dia mampiasa vola amin'ny fananana fomba fijery ivelany sy ny fanohanan'ny mpanazatra mpitarika. Na efa nanana leadership coaching ianao na tsia dia afaka manampy anao hahatratra ny tanjonao azo ampiharina.
Ny paikady mampifangaro antsika
Ny paikady iraisanay dia misy ny siansa, ny data, ny fahaizan'ny olombelona ary ny dingana hamoronana fanovana maharitra.
Izahay eto amin'ny NextMapping ™ dia manana dingana voaporofo ary fomba fiofanana momba ny fanampiana hanampy anao:
Mandehana haingana ny haingam-pandeha haingana sy fanakorontanana mitohy amin'ny fahatokisana sy malefaka
Amboary ny fahaiza-mamorona sy ny fahaiza-manavao tena fotoana
Lazao ireo zava-tsarotra lehibe indrindra azonao arak'izay mety ho anao indrindra
Mahazoa toe-javatra bebe kokoa amin'ny 'antony' ary inona no manaraka ho anao sy ny orinasanao
Mamerina manatsara sy manatsara ny "OS" (toe-tsaina) mifantoka amin'ny habetsahana ary manome fahaiza-mitarika fiovana miaraka amin'ny fahitana mitaona ny ho avy
Tariho miaraka amin'ny paikady izay mampitombo ny antony manosika ny olona, ​​tsy mivadika ary mandray anjara ny ekipanao
Manaova serivisy serivisy hananganana mpamorona marika ho an'ny orinasanao
Paikady fanitarana ny fampihenana ny fahombiazan'ny tena sy ny asa
Mampivoatra ny raharaham-barotra
Fanontaniana lehibe manontany ny tenanao
"Inona no tokony hosainiko / tokony hataontsika mba hahatonga antsika ho lavitra lavitra amin'ny tanjontsika sy ny valiny herintaona manomboka izao?"
Efa mahomby ianao - ARY ny fampiasana coaching leadership an'ny NextMapping ™ dia afaka miantoka anao hanao fandrosoana mifanaraka amin'ny drafitra napetrakao tsara indrindra. Ny tena zava-misy dia mihazakazaka haingana araka izay vitanao ianao, ny herinao dia avy amin'ny be loatra ka mahazo aingam-panahy amin'ny lamina miverimberina ary fantatrao fa ny fananana vanim-potoana aingam-panahy bebe kokoa sy hetsika mifantoka dia hitarika anao amin'ny tanjonao. Azonao atao ny manao fampanantenanao amin'ny tenanao sy ny ekipanao izay tsy tratra noho ny tsy fahampian'ny fotoana na ny tsy fananana laharam-pahamehana. Ny 'inona' izay mila ovaina dia ny fifantohana amin'ny famoronana ny hoavinao mahatalanjona miaraka amin'ny fanampian'ny mpiara-miombon'antoka tompon'andraikitra, mpanazatra orinasa NextMapping ™. Ny coaching leadership NextMapping ™ dia manampy ny mpitondra toa anao mampiasa ny fomba fihevitray mpanazatra NextMapping ™ izay voaporofo fa hanampy anao hahatratra ny tanjonao. Alefaso mailaka izahay ao amin'ny michelle@NextMapping.com hamaky ny fotoam-pivoriana tsy misy fepetra.
Heverinao fa ny mpitondra mpanazatra antsika no vahaolana tsara indrindra ho anao?
NextMapping ™ dia dingana vita amin'ny fanampiana ataon'ny fikambanana, mpitarika, ekipa ary mpandraharaha mba hanandratra ny fahaizany mivezivezy amin'ny ho avy sy ho mialoha ny asa efa vonona izao.
Coaching mpitarika miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanazatra safidy ho an'ny mpitondra mba hampisondrotra ny fahaizany ho lasa vonona izao.